आजको न्युज शनिबार, ४ जेठ २०७६
म वेश्या हुँ, यसो भन्दा मलाई कुनै हिच्चकिचाहट हुँदैन । जब म एकान्तिक हुन्छु, तब विगतका अभिव्यञ्जनाहरूले मेरो घाँटी निमोठ्न थाल्दछन् । प्रश्रव वेदनामा छटपटाइरहेकी स्त्रीझैँ म छट्पटाउन थाल्छु, आफ्नै विगतप्रति । मैले यौनजस्तो नितान्त प्राकृतिक र जैविक तत्वलाई बेचेँ, यौवनलाई पैसासँग साटेँ ।
जीवनको यो प्रहरसम्म आइपुग्दा मात्र मैले थाहा पाएँ, कुनै पनि सम्बन्ध कालजयी हुने रैन’छ । सबै सम्बन्ध फिक्का र स्वार्थले लतपोतिएका हुदाँरहेछन् । जीवन सधैँ अस्तव्यस्त, दिनचर्या सबै केरमेर । सधैँको उही दौडधुप, भागमभागमाझ यौटा यान्त्रिक जीवन व्यतीत गरिरहेकी छु म । जीवनमा भाग्य, नियति र संयोग भनेका के हुन ? मलाई थाहा छैन । तर समय एकदम निकृष्ठ हुदोँरै’छ । जसले मेरो जीवन यतिविघ्न उजाड बनाइदियो । समयको यस्तो विकराल रुप यसअघि कहिल्यै अनुभूत गरेकी थिइनँ ।
१८ वर्षको ज्यादै संवेदनशील उमेर । राम्रो लाउने, मीठो खाने, रमाइलो गर्ने लगायतका इच्छा, आकांक्षाले बाँधिएको उमेर । तर मेरो त्यो उमेर ज्यादै कष्टमय बित्यो । कति सपनाहरू सजाएकी थिएँ । साकार होलान् भनेर विश्वस्त बनेकी थिएँ । तर अफसोच म हिँडेको समयले सबै त्राहीमाही पारिदियो । खोलाको बाँध फुटेझैँ चुहिएर गए ती नवजात सपनाहरू । जीवन भनेको के हो ? म परिभाषा बुझ्दिन । तर जीवन आफ्नै छनौटमा निर्मित हुने रै’छ । के मैले आफ्नो जीवन यस्तै चाहेकी हुँ त ? अहँ किञ्चित् होइन । भनिन्छ, आफ्नो विगतलाई बिर्सिएर भविष्यको पथमा हिँड्नुपर्छ रे ! तर विगत यस्तो जटिल हुने रै’छ, जसलाई भुल्नु कसैको सामथ्र्यमा रहनेरै’नछ । मान्छेले विगतलाई भूल्यो भने इतिहास रहनेछैन, सभ्यता रहनेछैन ।
पाँचथर जिल्लाको पहाडी दुर्गम गाउँ । म त्यहीँ जन्मिएँ, हुर्किएँ । आफ्ना किशोरवयका सम्पूर्ण समय त्यहीँ व्यतीत गरेँ । परिवार गरिबीको चक्रब्यूहँमा थियो । आफ्ना खेतबारीमा उत्पादित खाद्यन्नहरू वर्षभरिका लागि पुग्थेन । सधैँ सरसापट, किनबेच पर्म गरेर बाह्र जनाको परिवार कतिञ्जेल थेग्ला र ? आर्थिक दुरावस्थाले कक्षा ८ सम्मको औपचारिक शिक्षामा नै चित्त बुझाएँ ।
सुखद भविष्यको लागि श्रीमान्–श्रीमतीको अर्थ बुझ्दा–नबुझ्दै वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनुपर्यो । तर सुखद भविष्यको महत्वाकांक्षा केवल दिवास्वप्न थियो । श्रीमान् पनि आर्थिक रुपले त्यति सबल थिएनन् । तीनपुस्ताका सबै परिवारहरू एकै संगोलमा बस्तथे । सबैको फरक–फरक भान्छा र आर्थिक व्यवहार हुन्थ्यो । परिवार पूर्णतः पूख्यौली खेतिकिसानीमा आश्रित थियो । घरका आसलाग्दा पुरुषहरू सबै विदेश गएका थिए, उनीहरूको अत्तोपत्तो थिएन ।
विवाह भएको वर्षदिनपछि मैले जुम्ल्याहा छोराछोरी जन्माए । खाने अरु दुई मुखहरू थपिए । जति मेहनत गरे पनि अतिरिक्त बचत गर्न सकिएन । खेतले कमाएको खाएरै सकिन्थ्यो । त्यसमाथि साहूबाट ऋण लिइरहनु पथ्र्यो । आफ्नो नियतिप्रति आजित भएका श्रीमान्‌ले भने, “मिग्नोन, कति दुःख गर्नु यसरी ? सधैँ साहूको ऋणले जिन्दगी थलिने भयो । अब दुई÷तीन वर्ष विदेश पो भासिनुपर्छ क्यार ! तिमी घरव्यवहार सम्हाल है ।
उताबाट फर्किए’सी छोराछोरी पढाउनुपर्छ । सानोतिनो व्यवसाय गर्नुपर्छ ।” उनी यौटा दूधालु बालकजसरी टाँसिएका थिए त्यो रात । यसअघि कहिल्यै गम्भीर बनेका थिएनन् । उनको त्यो सामिप्यतालाई मैले नकार्न सकिन, आफ्नो स्वीकारोक्ति दिए । तथापि हामीसँग त्यत्रो पैसाको जोगाड थिएन । गाउँमा दूई साहूबाट असी हजार सयकडा पाँच रुपैयाँका दरले ऋण खोजेर उनलाई विदेश उडाएँ ।
केही महिना फेरि उही एकान्तिकपन । उनको अनुपस्थितिमा धाराप्रवाह समय कटान हुन्थेन । विछोडको त्यो प्रश्रवक्षण एकदमै क्लिष्ट भए । म अग्नीदहमा जलिरहैँ । औडाह हुन लाग्यो । अत्याधिक यौन चाहनाले चौतर्फी तड्पिन थालेँ । २४÷२५ वर्षको उमेर हुदोँ हुँ । त्यो उमेरमा विवाह गरेका स्त्रीलाई अचाक्ली यौनचाहना हुने रै’छ । म पलापला यौनआवेगले घायल हुन्थेँ ।
दिनमा छोराछोरीको हेरचाह, घरायसी काममा व्यस्त हुन्थे तर रातमा नितान्त एक्ली हुन्थेँ । विभिन्न यौनजन्य अनुभूतिहरूले सताइरहन्थ्यो । ओछ्यानको चौघेरामा कुनैपनि पुरुषलाई स–शरीर पाउनथेँ । त्यो समय आगोले पोलेझैँ पोल्थ्यो । म छट्पटाउन थाल्थेँ । श्रीमान्को याद अचाक्ली आउँथ्यो । धेरै समय आत्मरतिमा खर्चिए तर त्यो सबै अप्राकृतिक लाग्न थाल्यो । झन् तड्पन दिन्थ्यो । जथाभावी यौनसम्पर्क राख्नु समाजमा महिलाका लागि चरित्रहीन कार्य हो । समाजले वर्जित गरेको कुरामा मैले विद्रोह गर्नु मूर्खता हुन्थ्यो । अन्ततः केहीगरी मभित्रको ज्वार शान्त हुन सकेन ।
घाँसदाउरा, पानीपँधेरो, वनजङ्गल आउँदा–जादा म सदैव यौटा मान्छेलाई देखिरहन्थेँ । ऊ ‘मधेसतीर ट्रक चलाउँछु’ भन्थ्यो । ऊ जहिल्यै चौतारीमा बसेर मलाई यन्त्रवत् हेरिरहन्थ्यो । अग्लो, श्यामवर्णको बलिष्ठ थियो ऊ ।
एकदिन, त्यसैगरी ऊ चौतारीमा सुस्ताएको थियो । म आफ्नो घाँसको भारी बिसाउने बहानामा चौतारीतर्फ गएँ । एकछिन आरामको सास फेरेँ । उसले मलाई ‘पानी खान्छौ ?’ भनेर आफ्नो हातको बोतल दियो । मैले एकै सासमा पिएँ । उसले मलाई चाउचाउको यौटा पोको पनि हातमा थमाइदियो । मैले धन्यवाद दिएँ ।
त्यतिखेर हाम्रो कुनै औपचारिक संवाद भएन । तर त्यसपछिका दिनहरूमा हामी गाढा रंगझैँ नजिकियौँ । ऊ हाम्रो घरदेखि दूई÷चारघर पछाडि आफ्नो साथीकोमा बस्थ्यो । म लुकिछिपी उसलाई भेट्न जान्थेँ । हामी प्रशस्तै ठट्टा गर्दथ्यौँ । कहिलेकाँही हामीबीच गम्भीरप्रकृतिका गफ पनि हुने गर्दथे । फुर्सद हुनासाथ बहाना बनाएर विद्यालयको मैदान, खेतबारी, भीरपाखामा भेटेर घण्टौं कुरा गर्दथ्यौँ ।
एकदिन उसले मलाई ठट्टा गर्दै जिस्कायो, “मिग्नोन, कतिञ्जेल यो बुढा नभएको घरमा एक्लै बसिरहन्छ्यौ ? न्यास्रो लागेको छैन ? मसँग जान्छ्यौ ?”
मेरो उत्तर के हुनुपर्ने ? के उसको यो दृष्टताप्रति म प्रतिकार गरुँ ? अहँ, म त्यसरी प्रस्तुत हुन सकिनँ । उसको सहवास मलाई असीम लाग्न थालिसकेको थियो । मैले हठात् भनेँ, “मलाई कहाँ लान्छ्यौ नि ?”
ऊ छिलिएर भन्यो, “तिमी जहाँ भन्छ्यौ त्यहीँ लान सक्छु । आखिर सीप भा’को ड्राइभर हुँ । जहाँ लगेर नि तिम्लाई पाल्न सक्छु ।”
“त्यसो भएँ गइदिम्ला नि !” मेरो जिब्रो चिप्लियो । तत्क्षण मलाई पश्चताप भयो । श्रीमान्सँगको त्यत्रो वाचा–कसम कसरी यति छिटो बिर्सिएँ ? म यो के गर्न खोज्दैछु ?
“अनि तिम्रा छोराछोरी नि ?” उसले हतप्रभ भएर यक्षप्रश्न गर्यो ।
मैले ठट्टा गर्दै भने, “ति कहाँ मेरा छोराछोरी हुन् र ? उनीहरूका बाउका पो हुन् त । हामी फेरि पाम्ला नि !” अब मलाई कुनै संकोच भएन । ऊसँगको ख्यालठट्टा र भाग्ने तिकडमले मलाई नूतन अनुभूति मिलेको थियो, जसलाई गुमाउनु भनेको विरासतलाई अँगाल्नु सम्झिएँ ।
त्यसपछिका हाम्रा समय भाग्ने र भगाउने ठट्टामा केन्द्रित भए । हामी अक्सर जङ्गलमा जान्थ्यौँ । म रुखमा चढेर स्याउला झार्थें ऊ भुइँमा बटुल्थ्यो ।
एकदिन, आकाश कालोनिलो भएर धुमल्लिएको थियो । गुँडतिर लागेका चराचुरुङ्गीका आवाज एकदम कर्कश सुनिन्थ्यो । जङ्गलको भित्री भाग अँध्यारो भइसकेको थियो । उसले मलाई सुस्तरी आफ्नो बाहुपासमा खिच्यो । खेलौनाजसरी म उसको काखमा बसेँ । त्यसपछि के–के भयो मलाई थाहा छैन । उसले मेरो प्रथम चरणको तिर्खा मेटाइदियो ।
अब म उसलाई छोड्नै नसक्ने भएँ । हामी एकाविहानै त्यो गाउँबाट भाग्यौँ ।
कथाकार, मानिसको जीवनमा दुःख कदापि घट्नै रै’नछ । जहाँ गए नि दुःख, मात्र स्वरुप बद्लिने । के जीवनको प्राप्ती दुःख नै हो त ? कि केहो ?
भागेर पूर्वको विर्तामोड आएपछि हाम्रा दिनरातहरू सुखपूर्वक बित्न लागे । मलाई प्यासको अनुभूति हुन्थेन, मेरै बाजुमा बडेमानको धारा थियो ।
ऊसँग भागेर विर्तामोड आए पनि मलाई घरको सम्झनाले साह्रै पिरोल्न थाल्यो । फुल्दै गरेको कोपिलालाई जो म निमोठेर आएकी थिएँ । आफ्ना छोराछोरीको सम्झनाले अत्याधिक डस्न थाल्यो । मैले तिनलाई नौं महिना गर्भमा राखेर हुर्काएकी थिएँ । जे भए नि, ती मेरा रगत थिए । आफ्नो रगतको मायाजस्तो अरु केही हुन्न रै’छ । अब म घर फर्किएर जान सक्ने कुनै अवस्था थिएन । म पोइला गएपछि श्रीमान्‌ले छोराछोरीको हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाएछन् । साथीले भेटमा भनेकी थिई, “त्यो रण्डीलाई भेटूँ न, जिउँदै जलाइदिन्छु । त्यसले सबै बर्बाद पारी ।” उनको त्यो आवेगले मलाई झन् डर पैदा गरायो । जुन स्वभाविक पनि थियो ।
कथाकार, यदि तिम्री स्वास्नी कोही परपुरुषसँग सुतेको देख्यौ भने के गर्छौ ? भलै, तिमी नारीवादी कथाकार भएपनि तिम्रो हृदय कठोर बन्नेछ । त्यतिखेरै तिम्री श्रीमती पराई हुनेछे । तिमी उसलाई गलात्याएर घरबाट निकाल्नेछौ । कथाकार, यसमा तिम्रो दोष हुनेछैन । नारीहरू भनेका पुरुषका सम्पत्ति हुन । एउटाको सम्पत्ति अर्काको हुनै सक्दैन । नारीको धर्म भनेको पुरुषको हेरविचारमा आफूलाई समर्पित पार्नु, उसको यौनआवेगलाई शान्त पार्नु, छोराछोरी गर्भमा हुकाईदिनु र सन्तोषको सास फेर्नु हो । यही छ तिमीले बसालेको सामाजिक मान्यता, जसको परिपालना तिमीले पनि गर्नैपर्छ ।
जसरी मौसम परिवर्तन हुन्छ, त्यसरी ड्राइभर पनि परिवर्तन हुन थाल्यो । अब ऊ पहिलेजस्तो रसिक रहेन । ऊ दिनानुदिन रक्सी खाएर मसित झगडा गर्न थाल्यो । मलाई हप्काउने, तर्साउने, कुट्ने क्रियाकलाप उसका लागि किम्ती भए ।
म भन्थेँ, “म तिम्रा लागि सबै खुसी त्यागेर आएँ । मलाई यस्तो अन्याय गर्न मिल्छ ?”
ऊ भन्थ्यो, “त झिँगे मैले भन्नेबित्तिकै आउनुपर्छ ? भन, अब कोसित भाग्छेस् ?”
म चुपचाप रहन्थे । सबैभन्दा ठूलो गल्ती मैले गरेकी थिए, एकदुई दिन हेलमेल हुनेबित्तिकै यत्तिको खतरा मोल्नु हुन्थेन । अनायासै मैले आफूलाई सम्हालेँ ।
जसरी नि जीवन त चल्नुपर्छ । अब बाँकी जीवनलाई सफलतापूर्वक गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ । मैले परिस्थितिसँग सम्झौता गरेँ ।
एकदिन, सानोतिनो निहुँमा ऊ रिसाएर, “जेसुकै गर है । म चैँ हिँडे ।” भनेर घरबाट निस्कियो । हप्ता बित्यो, महिना बित्यो तर ऊ फर्किएन । यता, घरबेटीले कोठा भाडा मागेर किचकिच गर्नथाल्यो । मसित भाडा तिर्ने पैसा थिएन । न त काम गर्ने कुनै सीप नै । मैले काम खोज्न थाले । यौटा होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाएँ ।
भाडा माझेर महिनाको ८ सय हुन्थ्यो । करिब महिनादिन कामगरेपछि मेरो हातखुट्टा पानीले खायो । दिनभरी पानीमा भिज्नाले बिरामी हुदै गएँ ।
एकदिन होटल मालिकले काउण्टरमा बोलायो ।
“तिमीलाई भाडा माझ्न गाह्रो भएजस्तो छ । के तिमी वेटरको काम गर्छ्यौ ?” उसले भन्यो, “तिमी राम्री पनि छ्यौ । अझ मेहनत गर्यौ भने राम्रो पैसा कमाउछ्यौ ।”
म निशर्त तयार भएँ । मैले सोचेँ, ग्राहकले मागेको माछा, मासु, रक्सी र बियर तुरुन्त पुर्याइदिनुपर्छ होला, तब ग्राहक पनि कसो खुसी नहोला र ? तर मैले सोचेविपरित रहेछ । एकछिनमा यौटा मोटो, मातेको, घीनलाग्दो मान्छे आयो । मसित एक प्याक रम माग्यो । मैले काउण्टरबाट तुरुन्त लगिदिएँ । उसले मलाई रम खान कर गर्यो । मैले मानिनँ, कहिल्यै खाएकी थिइनँ । यतिकैमा उसले मलाई जबरजस्ती गर्न थाल्यो । त्यसपछि मेरो हातमा एक हजार राखिदिएर गयो । पछि साहूले ‘कति पैसा दियो भनेर सोध्यो ।’ मैले यथार्थ कुरा बताए । उसले मलाई पाँच सय दियो र आफू पाँच सय राख्यो ।
म महिनाको आठ सयमा भाडा माझ्न बसेकी । दिनमै पाँच सय कमाएपछि हर्षित भएँ । भाडा माझ्नुजस्तो गाह्रो काम पनि थिएन । मैले त्यही पेशालाई अँगाल्ने निधो गरेँ । तर मनको एक कुनामा डर लाग्थ्यो । जसलाई मैले महसुस नै गर्न सकिन । अन्ततः म यौनकर्मी महिलामा परिणत भएँ । वेश्या बनेँ ।
केही महिनापछि मेरो आसन्न भेट यौटा अनौठो ग्राहकसँग भयो । ऊ राजनीतिक नेताजस्तो देखिन्थ्यो । जहिल्यै आफ्ना साथीहरूसँग रक्सी खाना आउथ्यो । उनीहरूबीच राजनीतिक चर्काचर्की परिरहन्थ्यो । उनीहरू माओ, लेनिन, चे–ग्वेवाराका प्रसङ्ग निकालिरहन्थे । माक्र्सवाद र समाजवादका कुरा गरिरहन्थे ।
एकदिन, नेता एक्लै आएको थियो । उसले मलाई यौटा क्याबिनमा बोलायो । ऊ भन्थ्यो, “तिमीहरूको हितमा अब नियम/कानुन बन्नुपर्छ बुझ्यौ ? तिमीहरू यो पेशामा लाग्नु कुनै रहर हैन, बाध्यता हो । अब रेडलाइट एरिया तोकिनुपर्छ, जसबाट तिमीहरूले निर्धक्क आफ्नो व्यवसाय चलाउन सक्छौ ।” यस्ता कुरामा मलाई कुनै दिलचस्पी थिएन । म केही प्रतिउत्तर दिदैनथिएँ ।
म त्यो रात उसैसँग सुते । विहान उठेर उसले भन्यो, “मसँग हिँड । म तिमीलाई यहाँकोभन्दा डबल दिन्छु ।” म तत्क्षण जान तयार भएँ ।
नेताले मलाई इटहरी ल्यायो । इटहरी सहर विर्तामोडको तुलनामा ज्यादाँ भीडभाड थियो । धेरै विकसित पनि लाग्यो । उसले मलाई यौटा गेष्ट हाउसमा राख्यो । बजार लगेर उसले मलाई थरिथरिका फेसनदार कपडाहरू खरिद गरिदियो । ऊ भन्थ्यो, “मेरी श्रीमती विदेशमा छे । दुई छोराछोरी काठमाण्डूमा क्याम्पस पढ्छन् । तिमी मेरी सहयोगी बन । म पार्टीको कामले विभिन्न ठाउँमा गइराख्नुपर्छ, तिमी पनि मसितै हिँड । म तिम्लाई सोचेको भन्दा धेरै पैसा दिन्छु ।” मैले सहमति जनाए । मलाई लाग्यो, होटलमा दुनियाँसँग सुतेरबस्नुभन्दा त यो यौटेसँग सुत्न बेस हुन्छ ।
उसले मलाई आफ्नी स्वास्नीझैँ बनाएर राखेको थियो । मैले चाहेका, खोजेका तमाम कुराहरू मेरो अगाडि राखिदिन्थ्यो । मलाई मोटरसाइकलमा राखेर विभिन्न सहर तथा पार्कहरू घुमाउँथ्यो । उसको यौटै सर्त थियो, ऊसँग रातभरी सुत्नुपर्ने, जुन कार्य मेरो लागि गाह्रो थिएन ।
एकदिन म उठ्नमा विलम्ब भयो । म उठ्दा ऊ कोठामा थिएन । उसका सरसामानहरू पनि थिएनन् । मैले सारा वृतान्त म्यानेजरलाई सुनाएँ, उसले मलाई दया देखाएर त्यही बस्न आग्रह गर्यो ।
त्यहाँ ठूल्ठूला भुँडी भएका मान्छेहरू आउने गर्दथे । सायद ति सरकारी कर्मचारी थिए क्यार । मैले कहिल्यै सोध्ने आँट गरिन । मैले उनीहरूलाई खुसी परिदिनुपथ्र्यो, उनीहरूको यौनकामना पूरा गरिदिनुपथ्र्यो । गेष्टहाउसमा यस्ता थुप्रै गोप्य कोठाहरू थिए, जहाँ खुल्लमखुल्ला यौनजन्य कारोबार हुन्थ्यो । दिउँसै यौनसम्पर्कको काम हुन्थ्यो । त्यहाँ मजस्ता थुप्रै यौनकर्मी महिलाहरू थिए । दिनमा मेरो भागमा ३/४ जना पुरुषहरू पर्ने गर्दथे । म मूर्तीवत् सुतिदिन्थे । उनीहरू मेरो शरीरमा ताण्डव नृत्य गर्थे । यसरी नै मेरो दिनचर्या व्यतीत हुनथाल्यो । पछि कुरा बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ, त्यो नेता त पेशेवर दलाल पो रहेछ । यसरी जाल फिँजाएर, ऊ यौनकर्मी महिला गेष्टहाउसलाई ल्याइदिदो रहेछ ।
यहाँ मजस्तै थुप्रै दुखित बेसाहारा महिलाहरू छन् । उनीहरूका आ–आफ्नै कथाहरू छन् । कोही आफ्नै बाबु र दाजुबाट बलात्कृत भएर घर छोडेर हिँड्नेहरू छन्, कोही आफ्ना छोराछोरीको पालनपोषण/पढाइखर्च जुटाउने आमाहरू छन्, कोही धनी बाउका बिग्रेका छोरीहरू छन् । यिनिहरू सबैका कथा तिमीले लेख्नुपर्छ, कथाकार ।
हामीलाई सेना र पुलिसले अचाक्ली सताउँछन् । हाम्रो जीउधनको सुरुक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकाहरू हामीलाई नै लुट्न पछि पर्दैनन् । उनीहरू हामीसँग सुतेर पैसा नतिरी गाली गरेर हिँड्छन् । कतिले हाम्रा थुनचोलीमा राखेका पैसाहरू जबरजस्ती खोस्छन् । कसलाई भनूँ कथाकार यो व्यथा ? – कि यसले मसँग सुतेर पैसा दिएन ! के यिनिहरूलाई कानुनीरुपमा तह लगाउने केही आधार छैन ?
कथाकार, म यौनव्यवसायमा लागेको १० वर्षभन्दा बढी हुन लाग्यो । अब त रजनोवृत्तिको अवस्थामा नि प्रवेश गर्न लागे । शरीरका सम्पूर्ण अवयवहरू खोक्रो भइसकेँ । पुरुषहरू खै के पाउँछन् कोनि यो शरीरबाट ? पहिले–पहिले म यो पेशाबाट मातिएकी थिएँ तर यो कालान्तरमा आफैँलाई घृणा लागेर आयो । तर विकल्प केही छैनन् मसित । यौन व्यवसाय कदापि रहर बन्न सक्दैन । परपुरुष र परस्त्रीगमन कहिल्यै रहर बन्न सक्दैन । यो यौटा बाध्यता हो । सरोकारवालाहरूले यौनकर्मी महिलाहरूलाई जागीरको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो कि त अन्य उपाय दिनुपर्छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने जसरी नि यौनकर्मी महिलाको संख्या बढ्दै जान्छ । किनकी यो परापूर्वकालदेखि चलिआएको गोप्य थिति हो । जसरी नि चल्छ, चल्छ ।
कथाकार, जीवनमा मैले कहिल्यै प्रेमको पूर्ण प्रत्याभूति पाउन सकिन । केही न केही कमि रहिरह्यो । थुप्रै पुरुषहरू मेरो शरीरमा उफ्रिए, आफ्नो विषाक्त वीर्य फ्याके । तर ती केवल यौनतृप्तीका लागि थिए, प्रेमका लागि कदाचित् थिएनन् ।
अहिले छोराछोरीको खुब याद आउँछ । उनीहरूका आमा होइन् म । आमा हुदीँ हो त उनीहरूको पालनपोषण गरेर बस्थेँ । संकटमा साहारा दिन्थेँ । मैले यौनरापमा आमाको सबै दायित्वलाई मेटाइदिए । अब आमा भन्ने छैनन् उनीहरू । उनीहरूका नजरमा गिरेकी आईमाई भएकी छु । सुन्दछु, श्रीमानले अर्की विवाह गरेका छैनन् रे । घर फर्किएर जादाँ उनले स्वीकार गर्ने सवाल नै उठ्दैन । फेरि कुन मुखले घर फर्किनु ? एउटी वेश्याले सबैलाई सन्तुष्ट पार्छे तर ऊ कदापि सन्तुष्ट हुन सक्दिन । ऊ भित्रभित्रै सीसाझैँ टुक्रिन्छे, सबैको आर्दश नजरबाट गिर्छे, नम्नकोटीको वस्तु बन्छे ।
अब त जीवनलीला पनि समाप्त हुनेबेला भयो । बेसै हुनेछ, यो समाजबाट यौटी वेश्या घट्नेछे !
(साभार : साहित्य संग्रहालय)
प्रकाशित मिति: शनिबार, ४ जेठ २०७६